Voalaza fa namonjy lanonana tao amina finakaviana iray tany an-toerana, ireto olona ireto, ny sabotsy teo. Mety sakafo avy amin’ny menaka no namparary azy ireo na koa avy amin’ny “mayonnaise” natao tamin’ny sakafo fanokafam-bavony, hoy ny fanazavana azo. Vehivavy avokoa ny ankamaroan’ireo narary, izay nitaraina ho narary kibo sy nivalana ary narary an-doha. Voalaza fa taorin’ny sakafo nohanin’izy ireo, dia nitovy ny fisehoan’ny aretina. Ka avy hatrany dia nentina namonjy toeram-pitsaboana izy ireo. Ny iray tamin’ireo mbola tsy mahatsiaro tena hatramin’ny omaly. Efa tsy atahorana kosa ny fahasalaman’ny sasany amin’izy ireo, ka aorian’ny fanaraha-maso ny fahasalamany dia alefa mody avokoa izy ireo. Tsy nisy kosa ny aina nafoy tamin’ity fanampoizinana ara-tsakafo ity, hoy ny vaovao avy any an-toerana.